Namaritra ny tetikasa ho fampiasam-bola avy any Azia ho amin’ny famokarana angovo ny any Guinée Equatoriale, mialoha ny fihaonambe eran-tany, hatao any Abu Dhabi, momba ny angovo. Mitarika izany fihaonana izany ny Filankevitra Atlantika ; miomana ihany koa izao ny any Guinée Equatoriale. Anisan’ny hampiasa vola aty Afrika ny orinasa Petro Vietnam sy ireo orinasa hafa aziatika, samy hita any Emirats arabes unis, mpamatsy solika sy gazy. Nampahafantatra ny minisitra any Guinée, Obiang Lima, fa tsy tokony ho ny Sinoa irery no mampiasa vola any an-toerana. Hitarina amin’ny firenen-kafa any Azia atsimo atsinanana izany hampitomboana ny fampiasam-bola. Miitatra ankehitriny ny fifandraisan’i Guinée Equatoriale amin’ny firenena aziatika.
Nametra-pialana ny filohan’ny orinasa mpamatsy herinaratra any Afrika Atsimo, i Jabu Mabuza rehefa tsy tanteraka ny tsy hisian’ny fahatapahan-jiro any an-toerana. Fampanantenana tsy tanteraka nataon’ny fanjakana mpitantana. Nosoloina olon-kafa izany mpitantana izany, rehefa nametra-pialana, hanarina ny orinasa izay efa nampanantenain’ny fitondram-panjakana. Sarahina telo ny orinasa mpamatsy jiro Eskom: ho an’ny famokarana, fitaterana, ary famatsiana herinaratra.
Any Libreville, Gabon, ny banky BGFIBank, nanamafy ny fiaraha-miasa ho tombontsoan’ireo mpanjifa, nandraisana lohahevitra « Ny fiarahana ho an’ny asa tsara ». Nohararaotina tamin’izany ny Fihaonan’ny rehetra, fandraisana andraikitra sy fahitana ireo mpiara-miasa vaovao. Manamarina ny fandraisana andraikitra feno ny natao tamin’izany, mifanandrify amin’ny fepetra nofaritana eo anivon’ny Firenena mikambana hatramin’ny taona 2006. Nanaporofo ny fampiharana izany ny BGFIBank. Miisa 735 ireo miara-miasa ho an’izany any amin’ny firenena 10 samy hafa, anisan’izany eto Madagasikara.